Shefleru ချုံအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါသည်သင်တို့ကိုအင်တာနက်ကနေမဖြစ်ပြောပြမည်! ဒါဟာ 1 တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကိုလေပေါ်မှာပ, သင့် rastihu fertilize ရန်အချိန်ဖြစ်, ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနည်းရေလောင်းသင့်တယ်, တိုက်ရိုက်နေရောင်ထဲမှာ 20.00 အားဖြင့်ညဦးယံ၌ရပ်သင့်တယ်, တိတ်တဆိတ်သင်ပေးဖို့ရှိသည်နေကြသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုရှိမြေပြင်အနီးရှိစည်အပေါ်ကိုအနည်းငယ်ဘူးသီးကိုမေးချင်ခဲ့တယ်? ယခုငါအတိအကျတူညီအသက်အရွယ် Scheffler အနည်းငယ်သာနည်းနည်းကျောက်ကပ်ပေါ်လာဖို့စတင်အသုံးပြုပုံများထဲမှကျောက်ကပ်ပြီးသားစိုက်ပျိုး3ရွက်နိုးပြီတကား ကံကောင်းပါစေ! ဒါဟာဆက်ဆက်အညွန့် bokovyk ငါပေးမည်;)
အဘယ်ကြောင့်အဂတိလိုက်စားမှု nedovavit ၏ရှုပ်ထွေးသောအလှတရား
တစ်ချုံ Scheffler ဖွဲ့စည်းရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Scheffler, ကံမကောင်းနီးပါးမဟုတ်စိမျးရန်အလွန်ကျရောက်နေတဲ့။ ထိုအပင်တစ်ခုတည်းသီးနှံမကြာခဏနိုးထဖို့လည်းလာမယ့်တဦးတည်းပင်စည်ထဲမှာကြီးထွားလာရာရုံတစျခုကျောက်ကပ်, စေပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံဖွင့် perevershinivaetsya ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အဖြတ်ထိပ်လုံလုံလောက်လောက်နီးကပ်လျှင်ဒီဖြစ်ပျက်, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ငယ်ရွယ်စက်ရုံရှိ
သင်က vyschipnite အဆိုပါဖောင်းတစ်ဦးတည်းသာကျောက်ကပ်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်သိမြင်ပါကစက်ရုံအများအပြားမြုံနိုးထစေပါလိမ့်မယ်။ အနိမ့် rezanut လြှငျ, များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ဘူးသီးနှိုးပြီးလျှင်, စက်ရုံချုံဖုတ်စတင်သည်။
သို့သော်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာကိုသင် Scheffler ချုံ kerbovkoy ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုကောင်းစွာအချို့အထူးသဖြင့်အရပ်ဌာန၌ဦးရစ်သရဖူသငျသညျထွက်ပေါက်ကြီးထွားဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းတည်ဆဲအကိုင်းအခက်နှင့်တစ်ဦးကျောက်ကပ်နိုးထဖို့ရန်အသုံးပြုသည်, ပန်းမာန်အတွက်လူသိများသည်။ ဒီနည်းပညာအထူးသဖြင့် Scheffler အပေါ်, အပင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နွေဦးအတွက်တစ်ဦးချွန်ထက်သောဓါးနှင့်အတူအညှာပေါ်တွင်ဘူးသီး၏တက်ကြွသောတိုးတက်မှု၏အစအဦးပိုမိုနီးကပ်စွာအဆိုပါ cortex တစ် semilunar ခွဲစိတ်ပါစေ။
ဒါကြောင့်အလွန်တုံ့ပျဉ်းပေမယ် Scheffler ချုံချွတ် nip နှင့်အတော်လေး zakustitsya မဟုတ်နိုင်
Posted in, တော်ပါတယ်